ငှက်ကလေးပြောတဲ့ မှတ်သားဖွယ် စကား ၃ ခွန်း - Thutazone
By ThutammPosted on August 21, 2017 August 24, 2018
သင့်အနေနဲ့ ကောင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ….. ပညာရှိကြီးတစ်ယောက်က အဲဒီလိုလုပ်တာဟာ မှားယွင်းကြောင်း ကျမ်းကိုးကျမ်းကားနဲ့တကွ ဝေဖန်ထောက်ပြလာခဲ့ရင် သင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားမှာလဲ။
တစ်ခါက ပညာရှိကြီးလို့ အများက အသိအမှတ်ပြု အရိုအသေပေးရတဲ့ အဘိုးအို တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူဟာ ကျမ်းစာအုပ်ကြီးတွေထဲက အဆိုအမိန့်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို အလွတ် အာဂုံဆောင်နိုင်ယုံတင် မကဘူး သွားလေရာ ယူသွားပြီး လူအများကို ဟောပြောပို့ချနေတဲ့ သူတစ်ဦးပေါ့…။
တစ်နေ့မှာတော့ ရွာတစ်ရွာကို ဟောပြောဖို့လာရင်း ငှက်ခတ်သမားနဲ့တွေ့လို့ ငှက်တစ်ကောင်ကို ၀ယ်ခဲ့တယ်…။ အိမ်ရောက်ရင် ငှက်ကို သတ်ပြီး ချက်စားရမယ်လို့ ပြောလိုက်မိတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း…
“မလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်ုပ်အသက်ကို ချမ်းသာပေးပါ” လို့ လူလို ပြောလိုက်တော့ ပညာရှိကြီးက အံ့သြသွားတာပေါ့..။ ပြီးတော့ “သင်က လူလို စကားပြောတတ်တယ်၊ ဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ဟာ သာမန်ငှက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ငှက်လောကမှာတော့ ပညာရှိ တစ်ဆူပါပဲ။ သင်နဲ့ အပေးအယူ လုပ်ချင်ပါတယ် ။ အသက်ကို ချမ်းသာပေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် တစ်သက်လုံး လိုက်နာရလောက်အောင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားသုံးခွန်းကို ပြောပြပါမယ်”
ပညာရှိကြီးလည်း စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ပညာကို တန်ဖိုးထားသူ ပညာရှိကို လေးစားတတ်သူ ဖြစ်လေတော့ ချက်ချင်းပဲ သဘောတူလိုက်လေရဲ့။ စကားသုံးခွန်းကိုသာ ပြောပါဆိုပြီးတော့ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်..။
“ဒါဆို သေချာမှတ်သားထားပါ။ ပထမတစ်ခွန်းက ဘယ်စကားကိုမဆို ပညာရှိကပဲပြောပြော ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ် အထဲကလို့ပဲ ပြောပြော ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့ သူတွေကပဲပြောပြော ယုတ်တိယုတ်တာ မရှိတဲ့စကား မဖြစ်နိုင်တဲ့ စကားဆိုရင် ယုံကို မယုံနဲ့ …….
ဒုတိယတစ်ခွန်းက ကိုယ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့အတိုင်းအတာ အကန့်အသတ်ကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သိရမယ် …….
တတိယတစ်ခွန်းက ကောင်းတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ကို ဘယ်တော့မှ နောင်တမရနဲ့။ အဲ့ဒါဟာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲတာပဲ အဖတ်တင်မယ်။ ဒါပါပဲ”
ပညာ၇ှိကြီးဟာ စကားကြီးသုံးခွန်းကို တတွတ်တွတ်ရေရွတ်ရင်း အရမ်းကို ကျေနပ်နေပြီး သူများတွေကိုလည်း ဟောပြောပြီး အိမ်မှာလည်း စာရွက်နဲ့ရေးပြီး ကတ်ထားရမယ်လို့ တွေးတောကာ လျှောက်လာနေတုန်းမှာ သူ့ရှေ့က သစ်ပင်ထက်ဆီက ရယ်သံသဲ့သဲ့ကြားလို့ မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ငှက်ဟာ သူ့ ကိုကြည့်ပြီး ရယ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
“သင်ဟာ အင်မတန်မှ မိုက်မဲပြီး ထုံထိုင်းညံ့ဖျင်းလွန်းလို့သာ ကျွန်ုပ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ တကယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းမှာ အဖိုးအနဂ္ဂ ထိုက်တန်တဲ့ ပတ္တမြားလက်စွပ် တစ်ကွင်းရှိတယ်။ ရလို့ကတော့ သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်မှာ မလွဲဘူး။”
အဲဒီစကားကို ကြားလိုက်တာနဲ့ပဲ ပိုဆိုးကို ခါးတောင်းကြိုက်ပြီး အပင်ပေါ်တတ်ဖို့ လုပ်တော့တာပေါ့။ ငှက်ကို ဖမ်းဖို့ အပင်ပေါ်ကို တတ်သွားတယ်။ သူ့လက်နဲ့ မှီလုမှီခင်ဖြစ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ငှက်ကလေးဟာ ပိုပြီးမြင့်တဲ့ဆီကို ကူးသွားတယ်။ သူက ထပ်တတ်လိုက် ငှက်ကလေးက အပေါ်ကို တိုးသွားလိုက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း သစ်ပင်ထိပ်ဖျားကို ရောက်လာပါလေရော။ သစ်ပင်ထိပ်ဖျားက အကိုင်းတွေက သေးသွယ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မခံနိုင်ဘဲ ကျိုးကျတယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အိုမင်းနေသူဖြစ်လို့ မြဲမြဲမြံမြံ ကိုင်စွဲမထားနိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ မြေကြီးပေါ်ကို ဘုန်းခနဲ ပြုတ်ကျပါလေရော၊ ကျိုးပဲဒဏ်ရာတွေနဲ့ ညည်းညူလဲကျနေတဲ့ ပညာရှိကြီးအနားမှာ ငှက်ကလေးက လာနားရင်းပြောပြတယ်။
“မိုက်မဲလှချည်လား၊ ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပတ္တမြားလက်စွပ် ရှိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါမလား၊ ဒါတောင် မစဉ်းစားတတ်ဘူးလား ၊ ဒါပေမယ့်လည်း သင်ဟာ ကျွန်ုပ်ကို လူစကား ပြောတတ်တဲ့ ငှက်ပညာရှိလို့ အထင်ကြီးပြီး ကျွန်ုပ်ပြောသမျှ ယုတ္တိမရှိတာကို ယုံခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သင်ဟာ အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေရဲ့နဲ့ ကိုယ့်စွမ်းအားရဲ့ အတိုင်းအဆ အကန့်အသတ်ကို မသိဘူး။ လောဘဇောတိုက်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်ကို အတင်းတတ်တယ်။ ၀မ်းမြောက်ရမဲ့အစား နောက်ဆုံး သင်ဟာ ကျွန်ုပ်ကို လွှတ်ပေးခဲ့တာကို ပြန်တွေးပြီး နောင်တရနေတယ်။ အခုတော့ ကြေကွဲခြင်းနဲ့ မျက်ရည်ပဲ အဖတ်တင်ရပြီ မဟုတ်လား။ ကဲ နေရစ်ခဲ့ပေတော့ ” လို့ ပြောပြီး အဝေးကို ပျံသန်းသွားပါတော့တယ် ။
ငှကျကလေးပွောတဲ့ မှတျသားဖှယျ စကား ၃ ခှနျး (unicode)
သငျ့အနနေဲ့ ကောငျးတယျလို့ယူဆထားတဲ့ အလုပျတဈခုကို လုပျပွီးတဲ့နောကျမှာ….. ပညာရှိကွီးတဈယောကျက အဲဒီလိုလုပျတာဟာ မှားယှငျးကွောငျး ကမျြးကိုးကမျြးကားနဲ့တကှ ဝဖေနျထောကျပွလာခဲ့ရငျ သငျ့အနနေဲ့ဘယျလိုခံစားမှာလဲ။
တဈခါက ပညာရှိကွီးလို့ အမြားက အသိအမှတျပွု အရိုအသပေေးရတဲ့ အဘိုးအို တဈယောကျရှိပါတယျ။ သူဟာ ကမျြးစာအုပျကွီးတှထေဲက အဆိုအမိနျ့တှေ၊ အတှေးအချေါတှကေို အလှတျ အာဂုံဆောငျနိုငျယုံတငျ မကဘူး သှားလရော ယူသှားပွီး လူအမြားကို ဟောပွောပို့ခနြတေဲ့ သူတဈဦးပေါ့…။
တဈနမှေ့ာတော့ ရှာတဈရှာကို ဟောပွောဖို့လာရငျး ငှကျခတျသမားနဲ့တှလေို့ ငှကျတဈကောငျကို ဝယျခဲ့တယျ…။ အိမျရောကျရငျ ငှကျကို သတျပွီး ခကျြစားရမယျလို့ ပွောလိုကျမိတာနဲ့ တဈပွိုငျတညျး…
“မလုပျပါနဲ့ ကြှနျုပျအသကျကို ခမျြးသာပေးပါ” လို့ လူလို ပွောလိုကျတော့ ပညာရှိကွီးက အံ့သွသှားတာပေါ့..။ ပွီးတော့ “သငျက လူလို စကားပွောတတျတယျ၊ ဟုတျလား”
“ဟုတျပါတယျ၊ ကြှနျုပျဟာ သာမနျငှကျ မဟုတျပါဘူး၊ ငှကျလောကမှာတော့ ပညာရှိ တဈဆူပါပဲ။ သငျနဲ့ အပေးအယူ လုပျခငျြပါတယျ ။ အသကျကို ခမျြးသာပေးပွီး ပွနျလှတျပေးမယျဆိုရငျ တဈသကျလုံး လိုကျနာရလောကျအောငျ တနျဖိုးရှိတဲ့ စကားသုံးခှနျးကို ပွောပွပါမယျ”
ပညာရှိကွီးလညျး စိတျဝငျစားသှားတယျ။ ပညာကို တနျဖိုးထားသူ ပညာရှိကို လေးစားတတျသူ ဖွဈလတေော့ ခကျြခငျြးပဲ သဘောတူလိုကျလရေဲ့။ စကားသုံးခှနျးကိုသာ ပွောပါဆိုပွီးတော့ ပွနျလှတျပေးလိုကျတယျ..။
“ဒါဆို သခြောမှတျသားထားပါ။ ပထမတဈခှနျးက ဘယျစကားကိုမဆို ပညာရှိကပဲပွောပွော ကမျြးကွီးကမျြးငယျ အထဲကလို့ပဲ ပွောပွော ကိုးကှယျဆညျးကပျတဲ့ သူတှကေပဲပွောပွော ယုတျတိယုတျတာ မရှိတဲ့စကား မဖွဈနိုငျတဲ့ စကားဆိုရငျ ယုံကို မယုံနဲ့ …….
ဒုတိယတဈခှနျးက ကိုယျလုပျနိုငျစှမျး ရှိတဲ့အတိုငျးအတာ အကနျ့အသတျကို ကိုယျ့ဖာသာကိုယျ သိရမယျ …….
တတိယတဈခှနျးက ကောငျးတယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီး ကိုယျလုပျလိုကျတဲ့ အလုပျကို ဘယျတော့မှ နောငျတမရနဲ့။ အဲ့ဒါဟာ ဝမျးနညျးကွကှေဲတာပဲ အဖတျတငျမယျ။ ဒါပါပဲ”
ပညာ၇ှိကွီးဟာ စကားကွီးသုံးခှနျးကို တတှတျတှတျရရှေတျရငျး အရမျးကို ကနြေပျနပွေီး သူမြားတှကေိုလညျး ဟောပွောပွီး အိမျမှာလညျး စာရှကျနဲ့ရေးပွီး ကတျထားရမယျလို့ တှေးတောကာ လြှောကျလာနတေုနျးမှာ သူ့ရှကေ့ သဈပငျထကျဆီက ရယျသံသဲ့သဲ့ကွားလို့ မော့ကွညျ့လိုကျတော့ သူလှတျပေးလိုကျတဲ့ ငှကျဟာ သူ့ ကိုကွညျ့ပွီး ရယျနတောကို တှလေို့ကျရတယျ။
“သငျဟာ အငျမတနျမှ မိုကျမဲပွီး ထုံထိုငျးညံ့ဖငျြးလှနျးလို့သာ ကြှနျုပျကို လှတျပေးလိုကျတာဖွဈတယျ။ တကယျဆိုရငျ ကြှနျုပျရဲ့ ကိုယျခန်ဓာတှငျးမှာ အဖိုးအနဂ်ဂ ထိုကျတနျတဲ့ ပတ်တမွားလကျစှပျ တဈကှငျးရှိတယျ။ ရလို့ကတော့ သငျဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခမြျးသာဆုံးဖွဈမှာ မလှဲဘူး။”
အဲဒီစကားကို ကွားလိုကျတာနဲ့ပဲ ပိုဆိုးကို ခါးတောငျးကွိုကျပွီး အပငျပျေါတတျဖို့ လုပျတော့တာပေါ့။ ငှကျကို ဖမျးဖို့ အပငျပျေါကို တတျသှားတယျ။ သူ့လကျနဲ့ မှီလုမှီခငျဖွဈပွီ ဆိုတာနဲ့ ငှကျကလေးဟာ ပိုပွီးမွငျ့တဲ့ဆီကို ကူးသှားတယျ။ သူက ထပျတတျလိုကျ ငှကျကလေးက အပျေါကို တိုးသှားလိုကျနဲ့ တဖွညျးဖွညျး သဈပငျထိပျဖြားကို ရောကျလာပါလရေော။ သဈပငျထိပျဖြားက အကိုငျးတှကေ သေးသှယျတဲ့အတှကျ သူ့ရဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို မခံနိုငျဘဲ ကြိုးကတြယျ၊ သူကိုယျတိုငျကလညျး အိုမငျးနသေူဖွဈလို့ မွဲမွဲမွံမွံ ကိုငျစှဲမထားနိုငျဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ မွကွေီးပျေါကို ဘုနျးခနဲ ပွုတျကပြါလရေော၊ ကြိုးပဲဒဏျရာတှနေဲ့ ညညျးညူလဲကနြတေဲ့ ပညာရှိကွီးအနားမှာ ငှကျကလေးက လာနားရငျးပွောပွတယျ။
“မိုကျမဲလှခညျြလား၊ ငှကျတဈကောငျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ပတ်တမွားလကျစှပျ ရှိတယျဆိုတာ ဖွဈနိုငျပါမလား၊ ဒါတောငျ မစဉျးစားတတျဘူးလား ၊ ဒါပမေယျ့လညျး သငျဟာ ကြှနျုပျကို လူစကား ပွောတတျတဲ့ ငှကျပညာရှိလို့ အထငျကွီးပွီး ကြှနျုပျပွောသမြှ ယုတ်တိမရှိတာကို ယုံခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ သငျဟာ အိုမငျးမစှမျးဖွဈနရေဲ့နဲ့ ကိုယျ့စှမျးအားရဲ့ အတိုငျးအဆ အကနျ့အသတျကို မသိဘူး။ လောဘဇောတိုကျပွီး သဈပငျပျေါကို အတငျးတတျတယျ။
ဝမျးမွောကျရမဲ့အစား နောကျဆုံး သငျဟာ ကြှနျုပျကို လှတျပေးခဲ့တာကို ပွနျတှေးပွီး နောငျတရနတေယျ။ အခုတော့ ကွကှေဲခွငျးနဲ့ မကျြရညျပဲ အဖတျတငျရပွီ မဟုတျလား။ ကဲ နရေဈခဲ့ပတေော့ ” လို့ ပွောပွီး အဝေးကို ပြံသနျးသှားပါတော့တယျ ။
Previous post မာယာလူမျိုးတို့ရဲ့ မြို့တော် Chichen Itza
Next post လက်ရှိ ကမ္ဘာ့မှတ်ဥာဏ်အကောင်းဆုံးလူသား